Tsapanareo Ve Izany Ankehitriny? - Quentin L. Cook
Los menús de LDS.org han cambiado. Más información.
Mi cuenta y mi barrio Iniciar sesión
Configuración de la cuentaMi árbol genealógicoSolicitud de bendición patriarcal
DirectorioCalendarioCalendario de leccionesBoletín
Todos HerramientasMapasFuentes de recursos para líderes y secretariosCentro de ayuda
EscriturasConferencia GeneralProfetas vivientes y líderes de la Iglesia
Temas del EvangelioHistoria de la Iglesia
Lecciones y enseñanzaRevistaMúsicaProgramas de logros
Doctrina de la familiaHogar y familiaTemplosHistoria Familiar
Esperanza y ayudaAutosuficienciaEmpleo y bienestar
Jóvenes adultosHombres y mujeres jóvenesNiños
Cómo compartir el EvangelioMormon.orgReferencias para misioneros
Prepárate para una misiónFormulario de recomendación para misionerosPortal para misionero(a) de tiempo completo
Multimedia que inspiraMúsicaConferencia GeneralRevista
Noticias de la IglesiaSala de prensa oficialPróximos eventosPáginas de países
Lidera en la IglesiaLecciones y enseñanzaBiblioteca Multimedia
Sacerdocio de MelquisedecSociedad de SocorroSacerdocio AarónicoMujeres JóvenesPrimariaEscuela DominicalServicio misionalSeminariosInstitutosTodos los llamamientos
Brinda tiempo y talentosLa Iglesia ayuda así
Fihaonamben’ ny Fiangonana Maneran-tanyFihaonambe Farany IndrindraIreo Fihaonambe Rehetra
Tsapanareo Ve Izany Ankehitriny?
Nataon’ny Loholona Quentin L. Cook
Ao amin’ny Kôlejin’ny Apôstôly Roambinifolo
Mieritreritra ny sasany ato am-piangonana fa tsy afaka mamaly eny tsy am-pisalasalana an’ilay fanontanian’i Almà izy ireo. Tsy mahatsapa “fifaliana sy fanavotana [izy ireo] ankehitriny.”
Ry Filoha Monson, tia, sy manaja, ary manohana anao izahay! Manentana fanahy izany fanambarana manan-tantara sy manana ny lanjany momba ny asa fitoriana izany. Tsaroako ny fientanentanana nisy tamin’ny taona 1960 rehefa nahena ho 19 taona fa tsy 20 taona ny taonan’ireo zatovolahy manompo. Tonga tany amin’ny Misiôna Britanika aho teo amin’ny faha-20 taonako. Ny misiônera voalohany 19 taona teo amin’ny misiônanay dia ny Loholona Jeffrey R. Holland, izay fanampiana mahatalanjona tokoa. Efa hadiva hananika ny 20 taona izy. Avy eo dia maromaro ireo 19 taona tonga nandritra ny taona. Misiônera nankatò sy nahatoky izy ireo ary dia nandroso ny asa. Matoky aho fa hitombo kokoa ny vokatra voajinja ankehitriny rehefa manatanteraka ny didin’ny Mpamonjy hitory ny filazantsara ireo misiônera marin-toetra sy manolo-tena.
Araka ny hevitro dia voaomana tsara kokoa noho ireo taranaka teo aloha ianareo izay ao amin’ny taranaka vao misondrotra. Mahatalanjona ny fahalalanareo ny soratra masina. Na izany aza, ny fanamby atrehin’ny olona mitovy taona aminareo eo am-piomanana hanompo dia mitovy amin’ireo izay atrehin’ny mpikamban’ny Fiangonana rehetra. Hitantsika rehetra fa tsy mitarika loatra amin’ny fiainana am-pahamarinana na zavatra ara-panahy ny kolontsaina iainana any amin’ny ankamaroan’izao tontolo izao. Nampitandrina ny olona sy nampianatra ny fibebahana ireo mpitarika ao amin’ny Fiangonana hatrany am-piandohan’ny tantara. Sahiran-tsaina mikasika ny tsy fahamarinana sy ny tsy fisian’ny fanoloran-tena i Almà Zanany ao amin’ny Bokin’i Môrmôna, ka dia niala tsy ho lohan’ny mpitsara izy, izay mpitarika ny vahoakan’i Nefia, ary nanangona ny herim-pony rehetra ho amin’ny antsony amin’ny maha-mpaminany azy.1
Milaza i Almà ao amin’ny iray amin’ireo andininy mifono hevitra lalina indrindra ao amin’ny soratra masina manao hoe: “Raha efa nandalo fiovam-po ianareo ary raha efa nahatsiaro ny hikalo ny hiran’ny fitiavana manavotra ianareo, dia hanontany aho, tsapanareo ve izany ankehitriny?”2
Nanao tatitra ireo mpitondra manerana izao tontolo izao fa raha jerena amin’ny ankapobeny, dia tsy mbola natanjaka toy ny amin’izao fotoana izao ireo mpikamban’ny Fiangonana, indrindra fa ireo tanorantsika. Saingy ny ankabeazan’izy ireo dia miresaka olana roa foana: voalohany, dia ny fanamby avy amin’ny fitomboan’ny tsy fahamarinana eto amin’izao tontolo izao, ary faharoa, dia ny tsy firaharahiana sy ny tsy fisian’ny fanoloran-tenan’ny mpikambana sasany. Mikatsaka torohevitra mikasika ny fomba hanampiana ireo mpikambana hanaraka ny Mpamonjy sy hahatratra fiovam-po lalina sy maharitra izy ireo.
Mbola manan-danja hatrany na dia aorian’ireo taonjato nifandimby aza ity fanontaniana ity izay manao hoe: “Tsapanareo ve izany ankehitriny?” Raha jerena ireo zavatra noraisintsika tao anatin’ity fotoampitantanana ity—ao anatin’izany ny Famerenana amin’ny Laoniny ny fahafenoan’ny filazantsaran’i Jesoa Kristy, ny firotsahan’ireo fanomezana ara-panahy, ary ireo fitahian’ny lanitra izay tsy azo hiadian-kevitra—dia tsy mbola nisy goavana toy izany ny fanamby natrehan’i Almà.
Nanoro hevitra ny Filoha George Albert Smith3 taoriana kelin’ny niantsoana an’i Ezra Taft Benson ho Apôstôly tamin’ny taona 1943, manao hoe: “Ny andraikitrao [… dia ny] … hampitandrina ny olona … amin’ny hatsaram-panahy araka izay azo atao fa ny fibebahana ihany no fanafody hanasitranana ireo aretina rehetra eto amin’ity izao tontolo izao ity.”4 Tao anatin’ny adin’ny Ady Lehibe II isika, tamin’ny fotoana nanaovana io fanambarana io.
Mihamitombo kokoa ny fahasimban’ny fitsipi-pitondrantena ankehitriny. Hoy ny mpanoratra fanta-daza iray, vao tsy ela akory izay, hoe: “Mahafantatra avokoa ny rehetra fa manimba ny kolontsaina, ary tsy misy na iza na iza manantena ny hiovan’izany.”5 Tsy roa aman-tany ny fanehoana an-tsary tsy an-kiato ny herisetra sy ny fahalotoam-pitondrantena ao anatin’ny hira, sy ny fialamboly, ary ny haino aman-jery hafa eo amin’ny kolontsaina iainantsika isan’andro. Nofaritan’ny teôlojiana Batista iray izay hajaina fatratra tamin’ny fomba mampivarahontsana izany, rehefa nilaza izy fa, “Tsy mahatohitra intsony ny faharatsiana ny hery fiarovana ara-panahin’ny sivilizasiôna iray manontolo.”6
Tsy mahagaga raha mieritreritra ny sasany ato am-piangonana fa tsy afaka mamaly eny tsy am-pisalasalana an’ilay fanontanian’i Almà izy ireo. Tsy mahatsapa “fifaliana sy fanavotana [izy ireo] ankehitriny.” Mahatsapa izy ireo fa ao anatin’ny fihenan’ny hery ara-panahy. Tezitra, sy maratra am-po, na diso fanantenana ny sasany. Raha mihatra aminao ireo famaritana ireo,7 dia zava-dehibe ny mandrefy hoe nahoana ianao no tsy afaka mahatsapa “fifaliana sy fanavotana ankehitriny.”
Tsy voatery ho nanao fahotana na fandikan-dalàn